uyilo Lwendlu | Etimnga 2021
I-39 Tiny House Designs (Imifanekiso)
Igalari yoyilo oluncinci lwendlu enezakhiwo ezahlukeneyo kunye nezicwangciso zomgangatho. Fumana izimvo ngezindlu ezincinci zesiko, uyilo lwala maxesha, izindlu zamakhaya kunye namakhaya anamavili.
Uyilo lwala maxesha lweNqaba yaseKhaya (ngaphakathi nangaphandle kwemifanekiso)
Umboniso: Nabisa le vidiyo ibonakalisa 'iCartmel Lane' (https://vimeo.com/69484133) ngu-Uneek Luxury Tours onelayisensi phantsi kweCC ngu: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ - Utshintsho olwenziwe luquka ukuhlela Uyilo olongezelelekileyo loyilo lwasekhaya ndwendwela la maphepha esiFrentshi ...
Isikhokelo sokugcina iikiti zasekhaya ezineentlobo ezithandwayo, izixhobo ezisetyenzisiweyo kunye neendleko. Jonga ukuba iikiti zokugcina izindlu zilungele iprojekthi entsha yoyilo lwasekhaya.
Uhlobo lweeModyuli zasekhaya zeRanch (Isikhokelo soYilo)
Isitayile seeranch isikhombisi sasekhaya esineempawu zangaphakathi nangaphandle, indleko kunye nokuyilwa kweefama. Jonga ukuba ngaba uhlobo lwefama yeemodyuli olunge kakhulu lungcono.
Izindlu zama-Victorian zaseSan Francisco (Uyilo lwegalari)
Igalari yezindlu zama-Victorian zaseSan Francisco kubandakanya iindlela ezithandwayo zoyilo, izixhobo kunye nokuhombisa. Isitayile seVictorian yoyilo lwamakhaya.
Uyilo lwasekhaya lweFama (ngaphakathi nangaphandle kweNgcinga)
Amakhaya anoyilo lwangoku lwefama kubandakanya ngaphakathi kunye nemibono yangaphandle. Imifanekiso yendlu yefama yanamhlanje, igumbi lokulala kunye neekhitshi.
Indlu yeShingle Style (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo sendlela yoyilo lendlu yeShingle egubungela izinto ezithandwayo zokwakha kunye neentlobo. Jonga iintlobo ezahlukileyo kwaye ufumane izimvo zesitayile se-shingle.
I-Ocean View French Villa kunye nophahla lwophahla
Le mifanekiso ibonisa indawo yolwandle yaseFrance enophahla lwophahla kwisiqithi saseCorsica. Ikhaya linikezela ngemibono emihle yoLwandle lweMeditera.
Uyilo lwangoku lweNdlu (ngaphakathi nangaphandle kwemifanekiso)
Jonga imifanekiso yale yoyilo yezigidi zedola yoyilo lwendlu ngaphakathi nangaphandle. Umgangatho wasekhaya wale mihla ubonelela ngamagumbi okulala ama-3 kunye namagumbi okuhlambela ama-3 ayile uyilo oluhle kunye nempahla ephezulu. Isicwangcisi esivulekileyo ekhitshini sijongane nendawo yokutyela kwaye sihamba siye kwigumbi lokuhlala sikwenza kube lula ukuzonwabisa.
Indlu yeGeodeic Dome (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo sokuyilwa kwendlu yeGeodeic ngobuchule kunye neengozi, iindleko kunye nezitayile ezithandwayo. Jonga imifanekiso yamakhaya edome geode kwaye ufumane imibono yoyilo.
ICape Cod Style House (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo sendlela yeCape Cod yoyilo yendlu kubandakanya neempawu ezidumileyo kunye nemibono. Jonga imifanekiso yamakhaya eCape Cod ahlaziyiweyo.
I-Ocean View Indlu yesitayile seMeditera
Umnxeba: Lo mxholo ubonakalisa 'i-Ocean View Villa' (https://vimeo.com/151979939) nguRiskin Partner onelayisensi phantsi kweCC ngu: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Uyilo lwaseKhaya olunxulumene nawe Ngamana ungathanda: Uyilo lweNdlu lwale mihla -Iingcamango zeGumbi lokuPhila lale mihla- Uyilo lwale Khitshi-la ...
Uyilo lwaseKhaya lwaseLwandle (Imifanekiso yokuhombisa, ngaphakathi nangaphandle)
Isibhengezo: Yandisa le vidiyo ibonakalisa 'iShellStreet' (https://vimeo.com/167171329) ngu-Uneek Luxury Tours onikwe ilayisensi phantsi kweCC ngu: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0//expand ezinxulumene neNdlu yoyilo lweeGalleries Unokuthanda: Ikhaya lePhondo laseFrance-Uyilo lwangoku lweNdlu-Isitayile seTuscan ...
Uyilo lweKhaya laMaxesha aphakathi
Uyilo lwasekhaya lwala maxesha aphakathi kubandakanya izinto ezithandwayo zale ndlela kunye nemibono yokulungiswa. Jonga imibono yenkulungwane yangaphakathi yoyilo lwangaphakathi.
Indlu yesitayile yeAcadian (Iingcamango zoyilo lwaseKhaya)
Isikhokelo sendlu yesimbo seAcadian kubandakanya ukuba yintoni, imibala kunye nezinto zangaphakathi kunye noyilo lwangaphandle.
Le ndlu yesikhongozeli inwenekayo inezixhobo zeepaneli zelanga zokuvelisa umbane. Jonga ukuba olu luyilo luncinci lwendlu lunokukunceda njani ukwehlisa kunye nokonga imali.
Uyilo lweNdlu yeBungalow yeNdlu (ngaphakathi nangaphandle kweNgcinga)
Isikhokelo sendlu yoyilo lwesakhiwo seBungalow sabelana ngezi zitayile zangaphakathi kunye neempawu zangaphandle. Jonga imifanekiso yesitayile sendlela yobungcwaba emakhaya kwimibono.
Indlu yeSikhongozelo sokuHambisa (iZakhiwo eziNcinci zeKhaya)
Igalari yezinto zokuhambisa iimpahla zekhonteyina. Jonga imifanekiso yoyilo oluncinci lwendlu enezinto ezinokwandiswa, ezinemigangatho emibini kunye noyilo lwangaphambili.
Uyilo lweNdlu yePhondo laseFrance (Uhlobo lwelizwe laseFrance)
Attribution: expandLe vidiyo inempawu '99 S.Bellaire Street '(https://vimeo.com/169733920) yi-Mediamax Photography Agency enelayisensi phantsi kweCC ngu: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0//expand Uyilo lweeKhaya zeGalleries onokuzithanda: Uyilo lweNdlu lwale mihla-Isitayile seTuscan Ikhaya -...
Amakhaya eBarndominium (Isikhokelo sokugqibela)
Isikhokelo samakhaya eBarndominium kubandakanya iinkcukacha zeempawu ezidumileyo, izixhobo kunye namaxabiso. Khangela ukuba i-barndominium yoyilo lwasekhaya ilungile kuwe.
phezulu 20 r & b iingoma zomtshato
Uhlobo lwendlu yasekapa
Iingoma zomdaniso kabawo wanamhlanje
imibala yomtshato ebomvu nemfusa
isitulo somthi esijingayo